Maalinta: 18-ka July, 2018
Guddoomiyaha Golaha Agaasimayaasha iyo Maareeyaha Guud ee Maamulka Duulista Hawada Gobolka Funda Ocak, barta twitter-ka ee saami qaybsiga nidaamyada duulista hawada iyo aaladaha, ayaa siiyay macluumaad ku saabsan shaqada kontoroolka duulista. Maareeyaha Guud [More ...]
1991 waa sanadkii Kemal Kemal Demirel iyadoo xubin ka ah SHP Group ay sagxad dhigtay shirkii Degmooyinka Caasimadda waxayna yiraahdeen "Dadka Uludağ waxaa lagu arkaa kaararka boostada. Aynu ka dhigno maalin 1 maalin rasmi ah usbuuc usbuucii oo aan u qaadno si bilaash ah, kuna nool Bursa [More ...]
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Xeer Ilaaliyaha Guud ee Xafiiska Xeer Ilaaliyaha
Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Proorlu, CHP Usak kuxigeenka Ozkan Yalim wuxuu ku tababaray musiibada ku saabsan tirada dadka dhintay ma muujineyso runta la sheegay. Xafiiska Xeer-ilaaliyaha wuxuu cadeeyay in muwaadiniinta 24 ay ku dhinteen shilkaas isla markaana muwaadiniinta 341 ay dhaawacmeen. [More ...]
CHP ayaa la sheegay inay naxdin ku dhacday intii lagu jiray Tirada dhimashada shil tareen ee Tekirdağ 41 P
Kuxigeenka CHP Usak Ozkan Yalim, degmada Corlu ee Tekirdag, tirada dadka ku dhintay shilka tareenka, 24 ayaa ka soo horjeedda sheegashada, ma ahan 41 sheegashada. 318 dadka ayaa sidoo kale dhaawacmay. Tirada dhimashada 24 ma aha 41 [More ...]
Road Works oo laga helay Bursa
Duqa Magaalada Bursa Alinur Aktaş, oo ah Dowlada Hoose ee Magaalada, wadada ayaa shaqeysa taas oo fududeyneysa isu socodka degmooyinka si xawli ah, marka loo eego, wadooyinka xaafadaha Iznik, saxeexyada Magaalo-Weyne. Dawlada Hoose ee Magaalada, Magaalada [More ...]
Salihli ilaa Beat Xili 97 Qarashka Asfalt
Dowladda Manisa ee Magaalo-weynta, dhir-ku-shaqeynta laga helo gobolka oo dhan ayaa weli ah mid aan xasilloonayn. Macnaha guud, wadada isku xirka Kiziluvlu iyo Akoren Neighborhoods waxaa lagu xiray degmada Salihli. Duqa magaalada Salihli Zeki Kayda iyo Manisa [More ...]
Mersin's 4. Mashruuca isgaadhsiinta badan oo badan ee wadada
Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin, 4. Waxaa loo soo gashaa gacmaha gacmaha mashruuca Isku-darka Guryaha badan. Duqa Magaalada Mersin Metropolitan Burhanettin Kocamaz wuxuu dhawrayaa balanqaadkiisii ​​iyo balanqaadkiisii ​​dadka Mersin. storeyed [More ...]
Samsun Bird Janno Xidhan Gaadiidka Gaadiidka
Dawlada Hoose ee Magaalada Samsun, Xarunta Kontoroolka Kızılırmak Delta Yörükler gendarmerie iyo nooca xarunta soo booqda ayaa ku waramay in aaggu uu xiran yahay isu socodka gaadiidka. Bayaanka ay soo saartay Dawladda Hoose ee Magaaladda Cawad ayaa ku saabsan sidan: “Samsun [More ...]
Xallinta dhibaatooyinka gaadiidka ee Mudanya
Mid ka mid ah Degmooyinka Muhiimka ah ee Bursa, oo ku taal xeebta badda, waa mushkiladda gaadiid ee soo food saartay gaar ahaan bilaha xagaaga. Gaar ahaan bilaha xagaaga ee ka yimid Bursa iyo Mudanya ilaa xarunta degmada Kumyaka iyo Trilye [More ...]
RayHaber 18.07.2018 Warbixinta Shirka
Howlaha ka-hortagga ayaa la sameyn doonaa Mashiinka Baadhista Mashiinnada waxaa lagu iibsan doonaa Ankaray Plant Jurnal Beddelka Dayactirka-Dayactirka Adeegga Iibsiga Konya Station Power Plant Cusboonaysiinta Shaqada Birta ee loo isticmaali doono ITALGRU Brand MHC Cranes [More ...]
Boulevard kale oo ka socda Caasimadda Kahramanmaraş
Dowlada Hoose ee Magaalooyinka Kahramanmaraş waxay sii waddaa inay furato wadooyin cusub iyo baraagyo xoogleh marka la eego baaxadda dhismaha iyo howlaha dayactirka ee Kahramanmaraş waxayna biloowday dhismaha boulevard cusub oo ballackeedu yahay 55 mitir. Xuduudaha Dulkadiroglu [More ...]
Qoondaynta Guriyeynta Sida uu qabo Maamulaha
Guddoomiyaha UDEM HAK-SEN Abdullah Peker, guryaha dadweynaha (hoy u ah) ee qoondeynta dareenka in ay heleen macaamil qaldan, wuxuu caddeeyay in haddii qeybinta Sharciga Guryaha Dadweynaha ay aadeyso garsoorka. Si toos ah ula xiriir UDEM [More ...]
Ka dib markii jihada Millet ee Cusbitaalka Osmangazi ee Eskişehir, taraamyada la joojiyey khadka Çankaya sababta oo ah dab ka dhawaa khadka. Jihada Jaamicadda Str Osmangazi kadib masraxa Millet, E Estram ayaa ku dhawaaqay ogeysiis. [More ...]
TCDD "Stone Stone Stone Animation
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD), kartuun film cusub oo loo diyaariyey by Agaasinka Guud. Filimka muuqaalka leh ayaa ujeedadiisu tahay inuu ka hortago shilalka dhagxaanta lagu tuuro tareennada ku ordaya khadka TCDD. Diyaar u ah in kor loo qaado wacyiga dadweynaha [More ...]